Flamingo Lighter Home | 24 Naryee
Product Code No:001550
Price : 10000 Kyats
ဒီဇိုင်းလန်းလန်းနဲ့ စတိုင်ထုတ်ချင်သူများ အတွက်တော့ ကွက်တိပဲနော်....
Battery Charger ကို USB နဲ့အားသွင်းရုံပါပဲ။ မီးညှိ Coil တစ်ခု အပိုပါရှိတဲ့အတွက် Coil လောင်သွားမှာကို စိတ်မပူရတော့ဘူးပေါ့။
Phone : 09797977551 / 09979333450
Email : thitthit.minimart@gmail.com
စာရင်းသွင်းပြီးသူ4ဖော်ပြချက်များ
35000.00 Kyat Ks
Hoco Air Puriﬁer AP01
1.Effectively remove formaldehyde, dust powder, chemical contaminants, benzene. etc. 2.Built-in high quality large polymer 2000 mA battery, more than5hours of battery life. 3. Micro usb input, boot strap with electrify, blackout intelligently, dela...
38500.00 Kyat Ks
WM 1300 Bluetooth Speaker
အသံထွက်အလွန်ကောင်းမွန်ပါသည်။ Bass သံလည်းအရမ်းကောင်းပါတယ်။ ဖုန်းဝင်လျှင်သီချင်း Auto stop ဖြစ်ပြီးဖုန်းပြောလို့ရပါတယ်။ Bluetooth,AUX,SD card & USB တို့ဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုလို့ရပါတယ်။ Mobile,MP3,MP4,ipod,ipad & any playerတို့ဖြင့်တွဲဖက်အသုံးပြုန...